Real Madrid oo dooneysa inay Manchester United iyo Chelsea ka dul qaado Lucas Digne. - Caasimada Online
Home Warar Real Madrid oo dooneysa inay Manchester United iyo Chelsea ka dul qaado...
Real Madrid oo dooneysa inay Manchester United iyo Chelsea ka dul qaado Lucas Digne.
Real Madrid ayaa u hanqal taageysa inay Janaayo soo dhaqaajiso xidiga diiradu u saran tahay kooxaha Manchester United iyo Chelsea Lucas Digne, si ay ugu dhisto dhibaatada ka heysata daafaca bidix.
19 jirkaan ayaa aalaaba ahaa daafaca kasooo dhex muuqday kooxdiisa Lille, wuxuuna bandhigiisa cajiibka ah kor usii qaaday sanadii hore, taasoo keentay inay u tafa xeydtaan kooxaha ugu waa weyn Yurub, sida uu qoray Wargeyka Talksport.
Hada waa dooqa koowaad ee daafaca bidix ee kooxda Lille, waxaana lagu amaanay baddhigii uu ka sameeyey sideed kulan oo horyaalka ah, halka afar kulan oo Champions League ah sanadii hore u ciyaaray kooxdiisa.
Waxaa si fiican ula dhacsan qaab ciyaareedkiisa United iyo Chelsea, labada koox ayaana doonaya inay da’yarkaan ku dhisaan siyaasadooda mustaqbalka fog.
Laakiin waxay qarka u saran yihiin inay ku waayaan Gacmaha Real Madrid oo dooneysa Inay soo qaadato Janaayo marka uu suuqu dib u furmo.
Kooxda Jose Mourinho aya dhibaato ka qabta daafaceeda qeybta bidix ka dib markii ay ka dhaawacmeen Marcelo iyo Fabio Coentrao, waxayna dooneysaa Los Blancos inay qorshe cusb dhisto marka uu dhasho sanadka cusubi.
W/Q: Ahmed Farah Jaangoan